कठै काङ्ग्रेस ! - Chautari Post Online
अब दुई वर्षमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पनि आजैदेखि सङ्गठन सुदृढीकरण सँगसँगै जनतासँग निकट रहने तथा आफ्ना कार्यक्रमहरू तयार गर्नु जरुरी छ । तर, काङ्ग्रेस त्यस दिशातर्फ उन्मुख छैन । यदि काङ्ग्रेसले आफूलाई सशक्त प्रतिपक्षीको रूपमा स्थापित गर्ने हो, साँच्चिकै लोकतन्त्रको रक्षक बन्ने हो र काङ्ग्रेस पार्टीलाई एकजुट भई अगाडि बढाउने र आगामी दिनमा बलियो पार्टीको रूपमा अगाडि आउने नै हो भने काङ्ग्रेसले कुनै बहाना नबनाई भ्रातृ सङ्गठनहरूलाई मजबुत बताउँदै समयमै महाधिवेशनको दिशातर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ । अन्यथा काङ्ग्रेसको अवस्था अझ दयनीय हुनेछ र त्यतिखेर ‘कठै काङ्ग्रेस’ भन्नुको अर्को विकल्प रहनेछैन । शुभेच्छुकहरूले त ‘कठै काङ्ग्रेस’ भन्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने सद्भाव राख्नेसम्म न हो ? घटना र विचार
Prevसरकारलाई ढाँटको सहारा
Nextफाइनल प्रवेशका लागि इंग्ल्यान्ड र अष्ट्रेलिया भिड्दै